Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Geeska Afrika oo Muqdisho booqday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Geeska Afrika oo Muqdisho booqday
Mareeg.com: Taliyaha ciidammada Mareykanka ee dalalka Geeska Afrika, Jeneral Well Crisp oo maanta Muqdisho soo gaaray ayaa booqday xarunta Villa Baydhaba oo ah taliska milateriga Soomaaliya iyo Wasaaradda Gaashaandhigga, iyadoo uu soo indho indheeyay dhammaan qeybaha ciidammada iyo sida ay u shaqeeyaan, halkaasi oo uu war-bixinno ka dhageystay saraakiisha madaxda ka ah xarumahaasi uu maanta booqday.
Jeneral Well Crisp waxa uu kulan la qaatay Taliyaha ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneral Daahir Aadan Cilmi (Indha-qarshe) iyagoo si toos ah uga wada hadlay saldhig Ciidammada Mareykanku uu ka sameeysanayo Soomaaliya iyo taakuleynta ay siiyaan Ciidammada Soomaaliya, waxa uuna ballan qaaday Jeneral Well Crisp taliyaha ciidanka Maraykanka ee dalalka Geeska Afrika in ay sii xoojin doonaan taageerada Ciidammada qalabka sida ee Soomaaliya ay siinayaan.
Taliyaha ciidammada Xoogga dalka Soomaaliya, ayaa ammaanay booqasho uu Jeneral Well Crisp maanta Muqdisho ku yimid, waxa uuna sheegay in Saldhigga Ciidammada Mareykanka ee Soomaaliya uu noqon doona mid waxtar u leh Ciidammada qalabka sida ee Soomaaliya.
Jeneral Daahir Aadan Cilmi ayaa ugu hambalyeeyey ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed guulihii ay ka gaareen howlgallada ay ka wadaan gobollada dalka ee Badweynata Hindiya, isagoo Taliyuhu howlgaladaasi ku sheegay in ay yihiin kuwa looga gol’leeyahay in dalka oo dhan looga saaro Al-Shabaab.
Sidoo kale Taliyaha ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa kula taliyey dhallinyarada ay Al-Shabaabka ah iney isu soo dhiibaan ciidamada Soomaaliya.
Ugu dambeyntii taliyaha Ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed, Jeneral Daahir Aadan Cilmi (Indha-qarshe) ayaa hoosta ka xariiqay in deegaannada ay ciidammadu howlgallada ka fulinayaan in si dhow ay uga warqabaan oo ay xiriir wada leeyihiin Bulshada iyo saraakiisha howlgalka hoggaamineysa.
Xeer Ilaaliyaha Guud oo soo bandhigay dukumiintiyo been abuur ah
Madaxweyne Xasan oo gaaray Kenya kana qeybgelaya shir xasaasi ah